lahatsoratra tena mahaliana. Faly aho fa nilaza ianao fa ny automation ara-barotra dia ho an'ny orinasa amin'ny habe rehetra, satria angano mahazatra fa ny lehibe ihany no mahazo tombony amin'ny fitaovana automatique.
15 Desambra 2016 à 5:33
Maria, misaotra anao amin'ny fanehoan-kevitra.
Miombon-kevitra tanteraka aminao. angano mahazatra tsy maintsy "botehina"!!!
Misaotra amin'ny torohevitra. Mikasa ny hanandrana ny automatique marketing aho amin'ny taom-baovao ary betsaka ny tokony hianarana. Ahoana ny hevitrao momba ny sehatra, toy ny GetResponse? Ny olana ho an'ny orinasa madinika maro dia ny teti-bola ho an'ny rindrambaiko automation marketing. Avy eo dia tonga ny fotoana ilaina amin'ny fampiofanana.
Salama Edna, tena nanosika ahy hizara ny eritreritro ianao amin'ny fisafidiananao sehatra Marketing Automation. Sehatra mafy orina ny GetResponse – saingy mila mahazo antoka ianao fa mandinika ny fomba hampiasanao azy sy ny loharano anananao mialoha. Nanoratra momba ireo aho antony amin'ny fividianana sehatra Marketing Automation Eto.
Lahatsoratra tsara, Douglas! Tsy maintsy mamaky ho an'izay rehetra mieritreritra ny hividy sehatra automation marketing. Misaotra anao mizara ny traikefanao.
Edna, misaotra anao amin'ny valinteninao. Tsy mbola nampiasa GetResponse aho, ka raha ny marina, tsy afaka manoro na inona na inona aho. Misy olana amin'ny tetibola ho an'ny orinasa madinika, saingy azoko antoka fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mendrika izany. Ny fanontaniana momba ny fiofanana dia misy ihany koa fa ny ankamaroan'ny fitaovana na rindrambaiko dia manolotra fitsapana maimaim-poana ho anao mba hahazoana antoka raha mifanaraka amin'ny filanao ny serivisy.